🥇 ▷ Helitaanka iPhone ka baxsan ama khadka tooska ah waxay suurtogal ku tahay iOS 13 ✅
Helitaanka iPhone ka baxsan ama khadka tooska ah waxay suurtogal ku tahay iOS 13
Luminta ama xatooyada aaladda sida iPhone, iPad ama Mac waxay noqon kartaa madax xanuun dhab ah. Kaliya maaha lacagta ay qalabkani ku kacayaan laakiin faa iidada ay aaladani noogu siinayaan nolol maalmeedkeena, macluumaadka aan ku kaydsano gudaha iyo xitaa qiimaha dareenka ay noo lahaan karaan. Hagaag, waxay umuuqataa inay ugu mahadcelinayso nidaamyada hawlgalka cusub waxaan ugu dambeyntii ka heli karnaa xitaa marka aysan ku xirneyn internetka ama dansan. Si kastaba ha noqotee, waxaan sii wadi doonaa inaan helno dib u dhac muhiim ah. Wax kasta oo hoose ayaan kuu sheegaynaa.
Marka waxaan heli karnaa qalabkeena Apple lumay
Waqtiga xaadirka ah “Raadin” ee ku jira aaladaha macruufkayaga iyo xitaa websaydhka iCloud, wuxuu noo oggolaanayaa inaan helno aaladdayada khariidad markasta oo ay saaran tahay oo ku xiran internetka. Sidoo kale qalabka ‘macOS’ waa suurtagal in la helo macluumaadkan haddii shuruudo isku mid ah la buuxiyo. Tan darteed, shaqadan waa in lagu hawl galiyaa aaladda aaladahayaga.
Imaatinka iOS 13, iPadOS iyo macOS Catalina Deyrtan waxay horumar weyn ku keeni doontaa raadinta aalado la xaday ama lumay. Hadda wixii ka dambeeya nidaamyadan waxay horumarin ku sameyn doonaan dalabka Raadinta, kaas oo hadda sidoo kale ku jira kuwa Raadinta Saaxiibadayda goob joog ka ah noocyadii hore oo aan ku heli karno xiriirada aan ku darnay.
Warbaahinta MacRumors waxay mas’uul ka ahayd inay xasuusato mid ka mid ah howlihii cusub ee ay soo bandhigtay Apple sanadkii la soo dhaafay WWDC 2019 oo lagu sheegay in tignoolajiyada Bluetooth-ka Waxay u adeegi kartaa inay ka dhigto aaladeena inay u adeegaan sidii digtoon oo meesha yaal xitaa xitaa la bakhtiin karo. Tani waxay sidoo kale yeelan kartaa cilaaqaad gaar ah oo lala yeesho qalab la soo sheegay oo noo saamaxaya inaan helno shay kasta oo nooceeda ah oo ku xirnaan doona iPhone-keena.
Hoos u dhaca waxaas oo dhami waa in si sax ah loo soo maro sababta oo ah isku xirka waxaa dhidibbada u aasay aaladda Bluetooth-ka, Ma awoodi doonno inaan helno aaladda haddii ay aad uga fog tahay meesha aan taagan nahay. Haddii ay dhacdo in qalabkii gurigaaga laga waayey ama meel ku dhow ay waxtar lahaato laakiin haddii ay tahay kiis xatooyo ah way sii adkaan kartaa maxaa yeelay suurtagalnimada wadarta guud ee tuuggu wuu ka dhaqaaqi doonaa meel ku filan sidaa darteed ma ogaan karno Aaladda Bluetooth.
Waxaan rajeyneynaa, maadaama ay ilaa hadda dhacdo, aaladda xatooyo inay sii wadi karto xiriirinta khadka internetka, taasoo markaa aan arki doonno xaaladdiisa juquraafi ahaan sidii hore. Laakiin isagoo macquul ah, Xaaladaha badankood waxa ugu horreeya ee ay tuugadu sameeyaan waa demi aaladda.
Ku soo noqoshada kiiska in aaladda lumay ay dhowdahay, waan awoodnaa soosaar cod gudaheeda si ay noogu fududaato inaan helno. Wax aan hadda sameyn karno oo taas aad ula mid ah shaqada oo ka mid noqota Apple Watch ee Xarunta Kontoroolka oo aan codka ku soo saari karno iPhone.
In kasta oo shaqadan loo baahan yahay in aan la dhayalsan, waxaan aaminsanahay in mustaqbalka Apple uu ka shaqeyn doono in lagu daro xitaa hawl aad ufiican oo dhameystiran kaas oo awood u leh inuu ku helo meel qalab ka fog xitaa haddii ay aad uga fog tahay meesha aan gaarno. Qaabkaas, ugu dambeyntii, waxaad awood u yeelan doontaa inaad siiso amniga guud iyo xasiloonida maskaxda ee isticmaaleyaasha haddii ay lumi lahaayeen iPhone, iPad ama Mac.